Teraka: 1 Janoary -460
Maty: 1 Janoary -370
Asa : * Dokotera
Hippocrates of Cos (amin'ny teny grika: Ἱπποκράτης, Hippocrates), teraka tamin'ny taona 460 talohan'i JK tany amin'ny nosy Cos ary maty tamin'ny 377 talohan'i JK. J. - C. in Larissa, dia dokotera grika tamin'ny taonjato Pericles, fa filozofa koa, raisina ho toy ny "rain'ny fitsaboana".
Nanangana ny sekoly Hippocratic izy izay nanova ara-tsaina ny fitsaboana tany Gresy taloha. Izy io dia mampiavaka ny fanafody sy mizaka tena amin'ny sehatra fahalalana hafa, toy ny teôria sy ny filozofia, hahatonga azy io ho matihanina amin'ny azy manokana.
Kely dia kely ny zavatra fantatra momba ny fiainan'i Hippocrates, ny eritreriny ary ny asa sorany. Na izany aza, matetika i Hippocrates dia faritana ho toy ny paragon'ny mpitsabo fahagola. Izy no nanomboka ny fomba iray sy fomba fanaraha-maso klinika, ary mpanorina ny fitsipi-pitondrantena ho an'ny mpitsabo, amin'ny alàlan'ny Hippocratic Oath sy lahatsoratra hafa ao amin'ny Hippocratic Corpus.
Mpialoha lalana fivarotam-panafody
Ny zanany dia Thessalus (physician).
Ao amin'i Freebase:  Archived Jiona 19, 2015 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hippocrate&oldid=1020634"
Teraka tamin'ny taona -460
Maty tamin'ny taona -370
Voaova farany tamin'ny 12 Aogositra 2021 amin'ny 02:35 ity pejy ity.